သင်၏ အီလက်ထရွန်းနစ် ပရောဂျက်များအတွက် အကောင်းဆုံး oscilloscopes | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
သင်၏ အီလက်ထရွန်းနစ် ပရောဂျက်များအတွက် အကောင်းဆုံး oscilloscopes
ဣဇာက်သည် | 06/05/2022 09:00 | အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ
အီလက်ထရွန်နစ်ဓာတ်ခွဲခန်း ထူထောင်လိုပါက၊ ပျောက်မသွားသင့်သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများထဲမှတစ်ခုမှာ oscilloscopes ဖြစ်သည်။. ၎င်းတို့နှင့်အတူ သင်သည် အချို့သော အတိုင်းအတာများကို တိုင်းတာရုံသာမက၊ ပိုလီမာများသို့သော် analog နှင့် digital signals များတွင် အလွန်ဂရပ်ဖစ်ရလဒ်များကို သင်တွေ့ရပါမည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အသုံးအများဆုံးကိရိယာများထဲမှတစ်ခု သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲ၊ ၎င်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကို ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပြသမည်ဖြစ်ပြီး၊ ငွေတန်ဖိုးအရှိဆုံး အမှတ်တံဆိပ်နှင့် မော်ဒယ်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤ oscilloscopes အများအပြားတွင် Linux ကဲ့သို့သော အခြားသောလည်ပတ်မှုစနစ်များအတွက် တရားဝင်ပံ့ပိုးမှုမရရှိသော်လည်း၊ အမှန်မှာ ၎င်းကဲ့သို့သော ဤပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် သင့်အား အသုံးပြုခွင့်ပေးမည့် ပရောဂျက်များရှိပါသည်။ OpenHantek Hanteks အတွက်၊ DSRremote Rigols အတွက် ဒါမှမဟုတ် ဒါက နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ Signent အတွက်။ ဤအမျိုးအစား ပရောဂျက်များမရှိပါက၊ သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် Windows နှင့် virtual machine ကို အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1 အကောင်းဆုံး oscilloscopes
1.1 အမှတ်တံဆိပ် Rigol
1.1.1 Rigol DS1102Z-E (အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း)
1.1.2 Rigol DS1054Z (အလယ်အလတ်အကွာအဝေး)
1.1.3 Rigol MSO5204 (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက်အကောင်းဆုံး)
1.2 Hantek အမှတ်တံဆိပ်
1.2.1 Hantek 6022BE (စျေးပေါဒစ်ဂျစ်တယ်)
1.2.2 Hantek DSO5102P (အလယ်အလတ်အကွာအဝေး)
1.2.3 Hantek 6254BD (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်)
1.3 Sigent အမှတ်တံဆိပ်
1.3.1 Sigent SDS 1102CML (ပိုမိုတတ်နိုင်သောရွေးချယ်မှု)
1.3.2 Sigent SDS1000X-U စီးရီး (အလယ်အလတ်အကွာအဝေး)
1.3.3 Sigent SDS2000X Plus Series (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက် အကောင်းဆုံး)
1.4 ခရီးဆောင် oscilloscopes
1.4.1 Sigent SHS800 စီးရီး (ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်ကိုင် oscilloscope)
1.4.2 HanMatek H052 (ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုး)
2 oscilloscope ဆိုတာဘာလဲ။
2.2 Oscilloscope အစိတ်အပိုင်းများ
2.3 Oscilloscope ဘေးကင်းရေး
4 oscilloscope အမျိုးအစားများ
5 အကောင်းဆုံး oscilloscope ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ဘာစက်ဝယ်ရမှန်းမသိရင် ဒီမှာ သွားကြည့် အကောင်းဆုံး oscilloscopes များနှင့်အတူရွေးချယ်မှု ဘာဝယ်နိုင်မလဲ။ စတင်သူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက် စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိပါသည်။ ဤရွေးချယ်မှုအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည် အကောင်းဆုံး အမှတ်တံဆိပ်3ခုကို ရွေးချယ်ထားပြီး ၎င်းတို့တစ်ခုစီမှ မတူညီသော မော်ဒယ်လ်3ခုကို ကမ်းလှမ်းထားသည်- စတင်သူများနှင့် အပျော်တမ်းများအတွက် ပိုမိုစျေးသက်သာသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု၊ အလယ်အလတ်အကွာအဝေးတစ်ခုနှင့် ပညာရှင်များအတွက် ပိုစျေးကြီးသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု။
Rigol DS1102Z-E (အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း)
Rigol တွင် ချန်နယ်2လိုင်း၊ 100 Mhz၊ 1 GSa/s၊ 24 Mpts နှင့် 8-bits ပါသည့် ဤဒစ်ဂျစ်တယ်အမျိုးအစားမော်ဒယ်ကဲ့သို့ သင်တွေ့နိုင်သော အကောင်းဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ် oscilloscopes အချို့ရှိသည်။ ရွေးချယ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် ချဲ့ကြည့်နိုင်မှု၊ လှိမ့်နိုင်မှု၊ အံ့သြဖွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်း၊ လှိုင်းပုံစံဖမ်းယူမှုအမြန်နှုန်း 30.000 wfms/s အထိ၊ မှတ်တမ်းတင်ထားသော လှိုင်းပုံစံ 60.000 အထိ ပြသခြင်းနှင့် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်မှုတို့ကို ခွင့်ပြုသည်။ TFT ဘောင်နှင့် WVGA ကြည်လင်ပြတ်သားမှု (7×800 px)၊ ချိန်ညှိနိုင်သော တောက်ပမှု၊ ဒေါင်လိုက်စကေးအကွာအဝေး 480mV/div မှ 1V/div၊ USB ချိတ်ဆက်မှု၊ ပစ္စတင် 10 ခုနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများ စသည်တို့ပါရှိသော ၎င်း၏ ကြီးမားသော 2" ရောင်စုံစခရင်ပေါ်တွင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။ .
Rigol DS1054Z (အလယ်အလတ်အကွာအဝေး)
၎င်းသည် အကောင်းဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ် အော်စစကုပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Rigol သည် ယခင်ကဲ့သို့ နှစ်ခုအစား ချန်နယ်4လိုင်းပါသည့် အံ့ဖွယ်ကိရိယာကို ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်း၏ 150 Mhz၊ 24Mpts၊ 1Gsa/s၊ 30000 wfms/s ကဲ့သို့သော အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် အင်္ဂါရပ်များဖြင့်၊ အစပျိုးမှုများ၊ စကားဝှက်၊ မတူညီသော အစပျိုးမှုများ၊ USB ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ပံ့ပိုးမှုနှင့် ယခင်တစ်ခုကဲ့သို့သော အခြားအင်္ဂါရပ်များစွာကို မျှဝေခြင်း၊ ၎င်း၏7လက်မနှင့် 800 × 480 px ရုပ်ထွက်၊ ၎င်း၏စကေးအကွာအဝေး စသည်တို့။ ၎င်းသည် မြင့်တက်ချိန်နှင့် ကျဆင်းချိန်၊ လှိုင်းပမာဏ၊ သွေးခုန်နှုန်း အကျယ်၊ တာဝန်စက်ဝန်းစသည်ဖြင့် ကိန်းဂဏန်း 37 ခုအထိ အလိုအလျောက် တိုင်းတာပေးမည်ဖြစ်သည်။
Rigol MSO5204 (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက်အကောင်းဆုံး)
Rigol MSO5204 သည် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် oscilloscopes များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းတွင် ချန်နယ်4ခု၊ 200 Mhz၊ 8 GSa/s၊ 100 Mpts နှင့် 500000 wfms/s တို့ပါရှိသည်။ ၎င်းတွင်9လက်မ ရောင်စုံ ထိတွေ့မျက်နှာပြင် (multi-touch)၊ capacitive LCD panel နှင့် အစွမ်းထက်သော ဟာ့ဒ်ဝဲတို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် အသေးဆုံးအသေးစိတ်များကိုပင် ဖမ်းယူပုံဖော်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤစခရင်သည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိပြီး အရောင်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ချိန်ညှိရန် အဆင့် 256 အထိရှိသည်။ မမ်မိုရီတွင် မတူညီသော လှိုင်းပုံစံ ကန့်သတ်ချက်များ 41 အထိ အလိုအလျောက် တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ သင်သည် LAN၊ USB၊ HDMI စသည်ဖြင့် မတူညီသော အင်တာဖေ့စ်များကို သုံးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Hantek 6022BE (စျေးပေါဒစ်ဂျစ်တယ်)
ဤ Hantek သည် အလွန်စျေးပေါပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ပြီး USB မှတစ်ဆင့် PC သို့ ချိတ်ဆက်သည်။ ၎င်းတွင် စခရင်မပါဝင်သော်လည်း ၎င်းတွင် Windows တွင် ထည့်သွင်းရန် ဆော့ဖ်ဝဲလ် (CD တွင် ပါ၀င်သည်) နှင့် ဤဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် သင့်ကွန်ပြူတာ၏ စခရင်မှတဆင့် အမြင်အာရုံများကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အရည်အသွေးမြင့် anodized အလူမီနီယမ်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် 48 MSa/s၊ 20 Mhz bandwidth နှင့် ချန်နယ်2ခု (16 ယုတ္တိ) ရှိသည်။
Hantek DSO5102P (အလယ်အလတ်အကွာအဝေး)
ဤအခြား Hantek အမှတ်တံဆိပ် oscilloscope တွင် 17,78 စင်တီမီတာ ထောင့်ဖြတ်နှင့် WVGA ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 800 × 480 px ရှိသည့် အရောင်မျက်နှာပြင်ပါရှိသည်။ ၎င်းတွင် USB ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ ချန်နယ်2ခု၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီနမူနာအတွက် 1GSa/s၊ 100Mhz ဘန်းဝဒ်၊ အလျား 40K အထိ၊ ရွေးချယ်နိုင်သော သင်္ချာလုပ်ဆောင်ချက် လေးခု၊ ရွေးချယ်နိုင်သော edge/pulse width/line/slop/overtime trigger modes စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း PC ဆော့ဖ်ဝဲ ပါဝင်သည်။
Hantek 6254BD (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်)
Hantek တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်းဆုံး oscilloscopes များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် ဤအခြားမော်ဒယ်လည်းရှိသည်။ USB ချိတ်ဆက်မှု၊ 250 Mhz၊ 1 GSa/s၊ ချန်နယ်4ခု၊ မထင်သလို လှိုင်းပုံစံ၊ ၎င်း၏ ထည့်သွင်းမှု၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည်2mV-10V/div အထိ၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည် (Plug & Play) ပါရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခု၊ ကာဗာအတွက် anodized အလူမီနီယမ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်၊ ၎င်း၏ဆော့ဖ်ဝဲကြောင့် PC ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့နှင့်အတူ၊
Sigent SDS 1102CML (ပိုမိုတတ်နိုင်သောရွေးချယ်မှု)
Sigent SDS 1102CML -...
ဤအခြားတစ်ခုသည် Signent အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် သင်ရနိုင်သော အတတ်နိုင်ဆုံး အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ oscilloscope မော်ဒယ်များတွင် 7" ရောင်စုံ TFT LCD မျက်နှာပြင်ပါရှိပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 480 × 234 px၊ USB မျက်နှာပြင်ပါရှိကာ၊ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်ရှိ အရာအားလုံးကို အဝေးမှကြည့်ရှုပြီး ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်စေရန် PC ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့်၊ လှိုင်းအကျယ် 150 Mhz၊ 1 GSa/s၊2Mpts နှင့် double channel နှင့်
Sigent SDS1000X-U စီးရီး (အလယ်အလတ်အကွာအဝေး)
SIGLENT စီးရီး SDS1000X-U...
၎င်းသည် ချန်နယ်4လိုင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် အမျိုးအစား၊ 100 Mhz လှိုင်းနှုန်း၊ 14 Mpts၊ 1 GSa/s၊ 7-လက်မ TFT LCD မျက်နှာပြင်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 800×480 px၊ super phosphor၊ များစွာသော အင်တာဖေ့စ်အတွက် ဒီကုဒ်ကိရိယာများပါရှိသော အလယ်အလတ် Siglent မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရှေ့ဘောင်ကြောင့် အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသည်၊ သစ္စာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန် SPO နည်းပညာဖြင့်စနစ်အသစ်၊ မြင့်မားသောအာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ တုန်လှုပ်မှုနည်းပါးသည်၊ 400000 wfmps အထိဖမ်းယူနိုင်သည်၊ ပြင်းထန်မှုအဆင့် 256 တွင်ချိန်ညှိနိုင်သော၊ အရောင်အပူချိန်၏ပြသမှုမုဒ် စသည်တို့
Sigent SDS2000X Plus Series (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက် အကောင်းဆုံး)
SIGLENT စီးရီး SDS2000X...
အကယ်၍ သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက် Signent ကိုလိုချင်ပါက၊ ဤအခြားမော်ဒယ်သည် သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်သည်။ အချက်ပြမှုများနှင့် ဒေတာများကို စောင့်ကြည့်ရန် ကြီးမားသော 10.1 လက်မ multi-touch မျက်နှာပြင်ပါရှိသော ကိရိယာ။ စမတ်အစပျိုးဖြင့် (အစွန်း၊ လျှောစောက်၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ window၊ runt၊ ကြားကာလ၊ ကျောင်းထွက်၊ ပုံစံနှင့် ဗီဒီယို)။ ၎င်းတွင် ချန်နယ်4လိုင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘစ် 16 ခု၊ 350 Mhz ဘန်းဝဒ်၊ 200 Mpts မှတ်ဉာဏ်အနက်၊ ဗို့အားတိကျမှု 0.5 mV/div မှ 10V/div၊ အမျိုးမျိုးသောမုဒ်များ၊2GSa/s နှင့် 500.000 wfm/s အတွက် စွမ်းရည်၊ 256 ချိန်ညှိနိုင်သော ပြင်းထန်မှုအဆင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ အရောင်အပူချိန်ပြသမှု၊ SPO နည်းပညာ၊ နှင့် အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သည်။
Siglent SHS800 စီးရီး (ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်ကိုင် oscilloscope)
SIGLENT စီးရီး SHS800...
ချန်နယ်2လိုင်း၊ 200Mhz Bandwidth၊ 32Kpts Memory Depth၊ တိကျသောတိုင်းတာမှုအတွက် 6000 Count Display၊ တိုင်းတာမှု 32 ခုအထိ၊ Trend Graphs၊ 800K Point Range၊ 24 Hour Recording Time ပါရှိသော Professional Handheld Oscilloscope တစ်ခု၊ ဒါ့အပြင် အသံဖမ်းချိန် 0.05 Sa/s ရှိပါတယ်။
HanMatek H052 (ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုး)
Multimeter လုပ်ဆောင်ချက် (3.5 in 2) ပါရှိသော 1 လက်မ TFT မျက်နှာပြင်ပါသော အသေးစားအရွယ်အစား oscilloscope ။ ဖန်သားပြင်သည် အလင်းပြန်ထားပြီး၊ ၎င်းတွင် အလိုအလျောက် ပျမ်းမျှ7ခုအထိ၊ 10000 wfms/s၊ 50 Mhz၊ 250 MSa/s၊ 8K အသံဖမ်းမှတ်များ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိရောက်သောတန်ဖိုးများ၊ လွတ်လပ်သော မာလ်တီမီတာနှင့် oscilloscope သွင်းအားစုများ၊ ပါဝါနှင့် အားသွင်းရန်အတွက် USB မျက်နှာပြင် -C စသည်တို့။
oscilloscopes ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ LCD ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ မတူညီသော လျှပ်စစ်ပြောင်းလဲမှုများကို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အီလက်ထရွန်နစ်တူရိယာများဖြစ်သည်။ ဆားကစ်တစ်ခု၏ ယေဘူယျအားဖြင့် သြဒီနိတ်ဝင်ရိုးပေါ်တွင် ကိုယ်စားပြုသည့်အချိန်နှင့် ကွဲပြားသော အချက်ပြမှုများ (X သည် signal ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရန် အချိန်ဝင်ရိုးနှင့် Y ဝင်ရိုးပေါ်တွင် အချက်ပြ၏ပမာဏအား ဗို့အားကိုယ်စားပြုသည် ဥပမာ)။ ၎င်းတို့သည် ဆားကစ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အချက်ပြတန်ဖိုးများ (အင်နာလော့ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်) အပြင် ၎င်းတို့၏အပြုအမူများကို စစ်ဆေးရန် အီလက်ထရွန်းနစ်နယ်ပယ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
Oscilloscope များတွင် လေ့လာနေသည့် circuit ၏ အချက်ပြမှုများကို ရယူရန် probes သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များ ရှိသည်။ oscilloscope သည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို ဂရုစိုက်မည်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ၎င်းတို့ကို အမြင်အာရုံဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။အပြောင်းအလဲများ (နမူနာယူခြင်း) ကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစပျိုးထိန်းချုပ်မှုများမှတဆင့် ၎င်းသည် ထပ်တလဲလဲလှိုင်းပုံစံများကို တည်ငြိမ်စေရန်နှင့် ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နမူနာယူပါ။: သည် မန်မိုရီတစ်ခုတွင် သိမ်းဆည်းရန်၊ ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပြသရန်အတွက် အဝင် signal ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအား သီးခြားလျှပ်စစ်တန်ဖိုးများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ နမူနာအမှတ်တစ်ခုစီ၏ ပြင်းအားသည် signal ကိုနမူနာယူသည့်အချိန်တွင် input signal ၏ amplitude နှင့် ညီမျှမည်ဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ဤအကွက်များသည် အမှတ်များကို မျဉ်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် vector များအဖြစ် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် interpolation ဟုလူသိများသော လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် လှိုင်းပုံစံများအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ရိုက်ချက်များ: ထပ်တလဲလဲလှိုင်းပုံစံကို တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ edge triggering၊ edge တက်လာခြင်း သို့မဟုတ် ပြုတ်ကျခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ စတုရန်းပုံ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အချက်ပြမှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် Pulse width triggering ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသော trigger ကဲ့သို့သော အခြားမုဒ်များလည်း ရှိပြီး oscilloscope သည် input signal သည် trigger condition နှင့် ကိုက်ညီသောအခါတွင်သာ ခြေရာခံကို ပြသမည်ဖြစ်ပြီး၊ မျက်နှာပြင်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး သဲလွန်စကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ၎င်းကို အေးခဲစေမည်ဖြစ်သည်။
Oscilloscopes သည် ဆက်တိုက်တိုင်းတာနိုင်သည်။ signal parameters တွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။:
peak မှ peak တန်ဖိုး
အချက်ပြကြိမ်နှုန်း (အနိမ့်နှင့် အမြင့်)
အချက်ပြ ကြိမ်နှင့် ပြုတ်ကျခြင်း။
တွဲနေနိုင်သည့် ဆူညံသံမှ အချက်ပြကို ခွဲခြားပါ။
မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ် ဆားကစ်များတွင် ပြန့်ပွားချိန်ကို တွက်ချက်ပါ။
အချက်ပြတစ်ခု၏ FFT ကိုတွက်ချက်ပါ။
impedance အပြောင်းအလဲများကို ကြည့်ပါ။
၎င်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်စေရန်သင်သိထားရမည့် oscilloscope ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့မှာ-
မော်ဒယ်များကြားတွင် ကွဲပြားမှုများ ရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် အဖြစ်များပါသည်။
ဖန်သားပြင်: သည် အချက်ပြမှုများနှင့် တန်ဖိုးများကို ကိုယ်စားပြုသော စနစ်ဖြစ်သည်။ ဤမျက်နှာပြင်သည် ရှေးယခင် oscilloscopes များတွင် CRT ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ ခေတ်သစ် oscilloscopes များတွင် ၎င်းသည် ယခုအခါ ဒစ်ဂျစ်တယ် TFT LCD မျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစခရင်များသည် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီး VGA၊ WXGA စသည်ဖြင့် မတူညီသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုများဖြင့် ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒေါင်လိုက်စနစ်: Y ဝင်ရိုး သို့မဟုတ် ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးအတွက် အချက်ပြအချက်အလက်များကို ကိုယ်စားပြုစနစ်အား ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းကို oscilloscope ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ကိုယ်စားပြုပြီး VERTICAL တံဆိပ်တပ်ထားသော ထိန်းချုပ်မှုဇုန်များ ရှိသည်။ ဥပမာ:
စကေး ​​သို့မဟုတ် ဒေါင်လိုက် ရရှိခြင်း။: ဗို့/ပိုင်းခြားမှုတွင် ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ် အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ချိန်ညှိပေးသည်။ oscilloscope ပါရှိသော ချန်နယ်တစ်ခုစီအတွက် ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု ရှိပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် 5V/div ကိုရွေးချယ်ပါက၊ မျက်နှာပြင်အပိုင်းတစ်ခုစီသည်5ဗို့ကိုကိုယ်စားပြုမည်ဖြစ်သည်။ ဂရပ်ပေါ်တွင် မှန်ကန်စွာ ကိုယ်စားပြုနိုင်စေရန် အချက်ပြဗို့အားပေါ်မူတည်၍ ၎င်းကို ချိန်ညှိရပါမည်။
မီနူး− ရွေးချယ်ထားသောချန်နယ်၏ မတူညီသောဖွဲ့စည်းပုံများကြားတွင် ရွေးချယ်နိုင်စေသည်၊ ဥပမာ input impedance (1x၊ 10x,…), signal coupling (GND, DC, AC), gain, bandwidth limitations, channel inversion (inverts polarity) စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အနေအထား: သည် signal ၏ခြေရာကောက်ကို ဒေါင်လိုက်ရွှေ့ပြီး သင်လိုသည့်နေရာတွင်ထားရန် အသုံးပြုသည့် command ဖြစ်သည်။
TFF: Fast Fourier Transform၊ signal ၏ ရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် သင်္ချာလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်မှုတစ်ခု။ ထို့ကြောင့် signal ကို အခြေခံ ကြိမ်နှုန်း နှင့် သဟဇာတဖြစ်အောင် ပိုင်းခြားထားသည်ကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
သင်္ချာ: ဒစ်ဂျစ်တယ် oscilloscopes များသည် အချက်ပြမှုများကို အသုံးချရန် အမျိုးမျိုးသော သင်္ချာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရွေးချယ်ရန် ဤဆက်တင်ကို မကြာခဏ ပါဝင်သည်။
အလျားလိုက်စနစ်: ဒေတာသည် တံမြက်လှည်းသည့်အမြန်နှုန်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိရန်အသုံးပြုသည့် တံမြက်လှည်းဂျင်နရေတာဖြင့် အလျားလိုက်ကိုယ်စားပြုသည့် ဒေတာဖြစ်သည် (ns၊ µဟုတ်တယ်၊ ms၊ စက္ကန့် စသဖြင့်)။ ဤ X ဝင်ရိုးအတွက် ဆက်တင်များ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးကို HORIZONTAL တံဆိပ်တပ်ထားသော ဧရိယာတွင် အုပ်စုဖွဲ့ထားသည်။ ဥပမာ၊ သင်ရှာနိုင်သော မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်၍
အနေအထား: ၎င်းတို့ကို ချိန်ညှိရန် X ဝင်ရိုးတစ်လျှောက် ရွှေ့ရန် သင့်အား ခွင့်ပြုသည်၊ ဥပမာ၊ လည်ပတ်မှုတစ်ခု၏အစတွင် အချက်ပြမှုတစ်ခုထားရှိခြင်း စသည်ဖြင့်။
Escala: ဤနေရာတွင် မျက်နှာပြင်ပိုင်းခြားမှု (s/div) အလိုက် အချိန်ယူနစ်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် 1 ms/div ထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဂရပ်၏ ပိုင်းခြားမှုတစ်ခုစီကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု မီလီစက္ကန့်ကို ကိုယ်စားပြုစေမည်ဖြစ်သည်။ နာနိုစက္ကန့်၊ မိုက်ခရိုစက္ကန့်၊ မီလီစက္ကန့်၊ စက္ကန့်စသည်ဖြင့် မော်ဒယ်မှပံ့ပိုးပေးသည့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် စကေးပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သေးငယ်သောအခိုက်အတန့်တွင် အချက်ပြမှု၏ မိနစ်အသေးစိတ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ဤထိန်းချုပ်မှုကို "ချုံ့ချဲ့ခြင်း" အမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်လည်း နားလည်နိုင်ပါသည်။
ဝယ်ယူမှု: ရယူထားသောဒေတာကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖော်မတ်သို့ ပြောင်းပြီး ၎င်းကို ဖြစ်နိုင်ချေ3မျိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး နမူနာကောက်ယူခြင်းဖြစ်သည့် ဒေတာရယူသည့်အမြန်နှုန်းကို အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ မုဒ်သုံးမျိုးမှာ-
နမူနာယူပါ။− ပုံမှန်အချိန်ကြားကာလများတွင် ထည့်သွင်းအချက်ပြမှုကို နမူနာယူပါ၊ သို့သော် signal တွင် လျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုအချို့ကို လွဲချော်နိုင်ပါသည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်: ဤသည်မှာ လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်များ ဆက်တိုက်ရရှိသောအခါ၊ ၎င်းတို့အားလုံးကို ပျမ်းမျှအားယူပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ရလဒ်အချက်ပြမှုကို ပြသသည့်အခါတွင် အလွန်အကြံပြုထားသည့်မုဒ်ဖြစ်သည်။
အထွတ်အထိပ် ထောက်လှမ်းခြင်း။: အချက်ပြနိုင်သည့် တွဲနေသော ဆူညံသံများကို လျှော့ချလိုပါက သင့်လျော်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ oscilloscope သည် အဝင် signal ၏ အမြင့်ဆုံးနှင့် အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးများကို ရှာဖွေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ပဲမျိုးစုံရှိ signal ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သို့သော်လည်း ဤမုဒ်တွင် တွဲထားသော ဆူညံသံသည် အမှန်တကယ်ထက် ပိုကြီးနေမည်ဖြစ်သောကြောင့် သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။
သေနတ်မောင်းခလုတ်: အစပျိုးစနစ်က အချက်ပြမှုကို စခရင်ပေါ်တွင် စတင်ရေးဆွဲလိုသည့်အခါ ညွှန်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် အခြေခံ 1 ကြိမ်စကေးကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ µs နှင့် X-axis ဂရပ်တွင် အလျားလိုက် ပိုင်းခြားမှု 10 ခုပါရှိပြီး၊ ထို့နောက် oscilloscope သည် တစ်မိနစ်လျှင် ဂရပ်ပေါင်း 100.000 ဂရပ်ဖစ်ကို ရေးဆွဲမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခုစီသည် မတူညီသောအချက်မှ စတင်ပါက ပရမ်းပတာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါမှ မဖြစ်ရင် ဒီပုဒ်မမှာ အဲဒါအတွက် ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုအချို့မှာ-
မီနူး: မတူညီသောရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်သည့်ရိုက်ကူးမှုမုဒ်များအတွက် ရွေးချယ်ကိရိယာ (လက်စွဲ၊ အလိုအလျောက်၊...)။
အဆင့် သို့မဟုတ် အဆင့်- ဤ potentiometer သည် အချက်ပြမှုအတွက် အစပျိုးအဆင့်ကို ချိန်ညှိပေးသည်။
force trigger: နှိပ်သည့်အခိုက်တွင် ပစ်ခတ်မှုအား အတင်းလုပ်ပါ။
probes: သည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမည့် စက် သို့မဟုတ် ဆားကစ်၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်သွယ်မည့် terminals သို့မဟုတ် test point များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လုံလောက်မှုရှိရမည်၊ မဟုတ်ပါက Oscilloscope သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် ကေဘယ်သည် အင်တင်နာအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အနီးနားရှိ တယ်လီဖုန်းများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ရေဒီယိုစသည်တို့မှ ကပ်ပါးအချက်ပြမှုများကို ကောက်ယူနိုင်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစွာသည် ဤပြဿနာများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန် potentiometer ပါရှိလာပြီး display axes ပေါ်ရှိရွေးချယ်ထားသောစကေးများနှင့်ကိုက်ညီသော display ပေါ်တွင်မှန်ကန်သောတန်ဖိုးများကိုပြသရန်အတွက် calibration လိုအပ်ပါသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် oscilloscope ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ သတိထားရန်ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးအစီအမံ စက်ပစ္စည်းကို မထိခိုက်စေရန် သို့မဟုတ် သင့်အား ထိခိုက်စေနိုင်သော မတော်တဆမှုများနှင့် မကုန်ဆုံးစေရန်။ ဘေးကင်းရန်နှင့် အသုံးပြုရန်အတွက် အကြံပြုချက်များကို လေးစားလိုက်နာရန် ထုတ်လုပ်သူ၏လက်စွဲစာအုပ်ကို အမြဲဖတ်ရှုရန် အရေးကြီးပါသည်။ မော်ဒယ်အားလုံးအတွက် အသုံးများသော ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအချို့မှာ-
မီးလောင်လွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ထုတ်ကုန်များဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အပူလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်လိုက်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို ဝတ်ဆင်ပါ။
oscilloscope probe နှင့် စမ်းသပ်ဆဲ circuit နှစ်ခုလုံးအား အကြောင်းပြချက်အားလုံးကို မြေချပါ။
တိုက်ရိုက်လွှင့်နေသော ဆားကစ်အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ဗလာဗလာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အကြံပြုချက်များကို မထိပါနှင့်။
စက်ပစ္စည်းများကို ဘေးကင်းပြီး မြေပြင်ပါဝါထောက်ပံ့မှုကွန်ရက်သို့ အမြဲချိတ်ဆက်ပါ။
သူ့ကို မတွေ့နိုင်သေးရင် လျှောက်လွှာတစ်ခု ဤစက်ပစ္စည်းအတွက်၊ သင့်အီလက်ထရောနစ်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် oscilloscopes လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည့်အရာအားလုံးကို သိထားသင့်သည်-
Signal amplitude ကို တိုင်းတာပါ။
အချက်ပြနှစ်ခု၏ အဆင့်ပြောင်းလဲမှု၏ ပျမ်းမျှ
Lissajous ကိန်းဂဏန်းများကို အသုံးပြု၍ XY တိုင်းတာမှုများ
ကောင်းပြီ၊ ဒါကို ပိုလက်တွေ့ကျတဲ့နည်းနဲ့ ဖော်ပြတယ်၊ အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။:
အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ကားများကို စစ်ဆေးပါ။
ဆားကစ်တစ်ခုရှိ ပြဿနာများကို စစ်ဆေးပါ။
ဆားကစ်တစ်ခုတွင် analog သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများကို စစ်ဆေးပါ။
အရေးကြီးသောစနစ်များတွင် အီလက်ထရွန်းနစ်အချက်ပြမှုများ၏ အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
ထို့အပြင် oscilloscopes များသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို ကျော်လွန်၍ အချို့သော လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို တိုင်းတာခြင်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးပြု၍ ဆေးရုံရှိ လူနာများ၏ သွေးပေါင်ချိန်၊ အသက်ရှူနှုန်း၊ လျှပ်စစ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု စသည်တို့ကဲ့သို့သော ဇီဝဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ အသံပါဝါ၊ တုန်ခါမှုများနှင့် အခြားအရာများကို တိုင်းတာရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောရှိပါတယ် oscilloscopes အမျိုးအစားများ. ဥပမာအားဖြင့်၊ အချက်ပြတိုင်းတာမှုများကို မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်ပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်-
analog: Analog မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်သို့ အသွင်မပြောင်းဘဲ CRT ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် တိုင်းတာသည့် ဗို့အားကို ပြသပါမည်။ ဤအရာများတွင်၊ အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် အချက်ပြမှုများကို ဖမ်းယူထားပြီး၊ အချိန်အခါအလိုက် ထပ်ခါတလဲလဲ မပြုလုပ်ပါက၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ယာယီဖြစ်ရပ်များကို အများအားဖြင့် ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်၊ ဤ oscilloscope အမျိုးအစားသည် အချိန်အပိုင်းအခြားမရှိသော အချက်ပြများကို မဖမ်းယူနိုင်ခြင်းကဲ့သို့သော ကန့်သတ်ချက်များရှိပြီး၊ အလွန်လျင်မြန်သော အချက်ပြမှုများကို ဖမ်းယူသည့်အခါ ၎င်းတို့သည် ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း ကျဆင်းခြင်းနှင့် အလွန်နှေးကွေးသော အချက်ပြမှုများကြောင့် စခရင်၏ တောက်ပမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ခြေရာများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ (မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပြွန်များတွင်သာ)။
ဒစ်ဂျစ်တယ်: ယခင်အရာများနှင့်ဆင်တူသော်လည်း ၎င်းတို့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှ analog signal ကိုရယူပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသမည့် ADC (A/D Converter) ဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ ရလဒ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ ၎င်းတို့ကို သိမ်းဆည်းရန်၊ စသည်တို့ကို PC သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းစသည့် ၎င်းတို့၏ အားသာချက်များကို လောလောဆယ်တွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံး ရရှိထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းတို့၏ circuitry ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အထွတ်အထိပ်တန်ဖိုးများ၊ အစွန်းများ သို့မဟုတ် ကြားကာလများကို အလိုအလျောက်တိုင်းတာခြင်း၊ ယာယီဖမ်းယူခြင်းနှင့် FFT ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်တွက်ချက်မှုများကဲ့သို့သော analog များချို့တဲ့သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
၎င်းတို့ကိုလည်း စာရင်းပြုစုနိုင်သည်။ ၎င်း၏သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုအရ:
အိတ်ဆောင် oscilloscope: ၎င်းတို့သည် တိုင်းတာမှုများကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သယ်ဆောင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကျစ်လစ်ပြီး ပေါ့ပါးသော တူရိယာများဖြစ်သည်။ နည်းပညာရှင်တွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ခွဲခန်း သို့မဟုတ် စက်မှုအော်စစကုပ်: ၎င်းတို့သည် ပိုကြီးသည်၊ ခုံတန်းတင် ကိရိယာများ၊ ပိုမိုအားကောင်းပြီး ပုံသေနေရာတွင်ထားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, နည်းပညာအရ သုံးသည်၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားခွဲခြားနိုင်သည်။
DSO (Digital Storage Oscilloscope): ဤဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှု oscilloscope သည် အမှတ်စဉ်လုပ်ဆောင်ခြင်းစနစ်ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် oscilloscopes များတွင် အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ယာယီဖြစ်ရပ်များကို ဖမ်းယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဖိုင်များတွင် သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ၎င်းတို့ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
DPO (Digital Phosphor Oscilloscope): ၎င်းတို့သည် analog များအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသကဲ့သို့ အချက်ပြ၏ ပြင်းထန်မှုအဆင့်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ မပြသနိုင်သော်လည်း DSO မှ မလုပ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် DPO သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်ဆန်သော အချက်ပြဖမ်းယူမှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ခွင့်ပြုသည်။
နမူနာယူခြင်း- ဒိုင်နမစ်အကွာအဝေး နိမ့်သောအတွက် မြင့်မားသော bandwidth ကို ကုန်သွယ်မှုပြုပါ။ ထည့်သွင်းမှုအား လျော့ချခြင်း သို့မဟုတ် ချဲ့ထွင်ထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ အချက်ပြမှု အပြည့်အစုံကို ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဒစ်ဂျစ်တယ် oscilloscope အမျိုးအစားသည် ထပ်ခါတလဲလဲ အချက်ပြမှုများဖြင့်သာ အလုပ်လုပ်ပြီး ပုံမှန်နမူနာနှုန်းထက် ကျော်လွန်၍ ဖြတ်သန်းမှုများကို ဖမ်းယူမရနိုင်ပါ။
MSO (Mixed Signal Oscilloscope)၎င်းတို့သည် DPOs နှင့် 16-channel ယုတ္တိဗေဒခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကြားတွင် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး parallel-serial bus protocol ကို ကုဒ်ဆွဲခြင်းနှင့် အသက်သွင်းခြင်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆားကစ်များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အမှားရှာခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
PC အခြေခံ: ၎င်းတို့တွင် မျက်နှာပြင်မပါသောကြောင့် USB oscilloscope ဟုလည်းသိကြသော်လည်း ချိတ်ဆက်ထားသော PC မှရလဒ်များကိုပြသရန် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အားကိုးပါ။
အခြားအမျိုးအစားများ ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပြီး သင်အများအားဖြင့် တွေ့ရမည့် အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး oscilloscope ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ဘယ်အချိန်မှာ ကောင်းသော oscilloscope ကိုရွေးချယ်ပါ။အောက်ပါလက္ခဏာအချို့ကို သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် သင်၏အသုံးပြုမှုအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အသင့်တော်ဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
oscilloscope ကို ဘာအတွက် လိုချင်တာလဲ။ လော့ဂျစ်အဆင့်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆားကစ်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် oscilloscope သည် RF အတွက် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူသောကြောင့်၊ သို့မဟုတ် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းကို သင်မည်သို့အသုံးပြုမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် ၎င်းကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ဝါသနာအရအသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ပထမကိစ္စတွင်၊ ပိုမိုကျွမ်းကျင်ပြီး တိကျသောစက်ပစ္စည်းတစ်ခုရရှိရန် အနည်းငယ်ပို၍ရင်းနှီးမြှပ်နှံသင့်သည်။ ဒုတိယကိစ္စတွင်၊ အလယ်အလတ်-နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့် တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပိုကောင်းသည်။
ဘတ်ဂျက်: သင့်စက်ပစ္စည်းများတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် မည်မျှရနိုင်သည်ကို သိရှိခြင်းက ဘတ်ဂျက်ကုန်နေသော မော်ဒယ်များစွာကို ဖယ်ရှားနိုင်စေပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေအကွာအဝေးကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Bandwidth (Hz): သင်တိုင်းတာနိုင်သော အချက်ပြများ၏ အကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်သည်။ သင်လုပ်ဆောင်မည့် အချက်ပြများ၏ အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းများကို တိကျစွာဖမ်းယူရန် လုံလောက်သော bandwidth ရှိသော oscilloscope ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် သင်တိုင်းတာလေ့ရှိသော signal ၏အမြင့်ဆုံး bandwidth5ဆထက်မနည်းပေးသည့် probe နှင့်အတူ oscilloscope ကိုရွေးချယ်ရန် စည်းမျဉ်း5ကိုသတိရပါ။
တက်ချိန် (= 0.35/ Bandwidth): ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြလှိုင်းများ သို့မဟုတ် လေးထောင့်လှိုင်းများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် အရေးကြီးပါသည်။ ပိုမြန်လေ၊ အချိန်တိုင်းတာမှု ပိုတိကျလေပါပဲ။ သင်အသုံးပြုမည့် အချက်ပြမှု၏ အလျင်မြန်ဆုံး မြင့်တက်ချိန် 1/5 ထက်နည်းသော နယ်ပယ်များကို သင်ရွေးချယ်သင့်သည်။
probes: မတူညီသောလိုအပ်ချက်များအတွက် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစွာပါရှိသော oscilloscope အချို့ရှိပါသည်။ ယနေ့ခေတ် oscilloscopes အများအပြားတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာမှုများအတွက် မြင့်မားသော impedance passive probes နှင့် active probes များပါရှိပါသည်။ အလယ်အလတ်အကွာအဝေးအတွက် capacitive loads < 10 pF ရှိသော probes များကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပိုကောင်းပါသည်။
နမူနာနှုန်း သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်း (Sa/so Samples per Second): အချိန်တစ်ယူနစ်ကို တိုင်းတာမည့် လှိုင်းများ၏ အသေးစိတ် သို့မဟုတ် တန်ဖိုးများကို အကြိမ်မည်မျှ ဖမ်းယူမည်ကို ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုမြင့်လေ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ပိုကောင်းလေ၊ Memory ကို ပိုမြန်လေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမည့် circuit ၏အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်း အနည်းဆုံး5ဆရှိသော oscilloscope ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
အသက်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အစပျိုးခြင်း။: ရှုပ်ထွေးသော လှိုင်းပုံစံများအတွက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော အစပျိုးမှုများ ပေးဆောင်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပိုကောင်းလေ၊ ရှာဖွေရခက်သော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကွဲလွဲချက်များကို သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လေဖြစ်သည်။
မှတ်ဉာဏ်အတိမ်အနက် သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းအရှည် (pts): ပိုများလေ၊ ရှုပ်ထွေးသော အချက်ပြမှုများအတွက် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ Memory တွင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည့် အမှတ်အရေအတွက်ကို ညွှန်ပြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်နေစဉ် ယခင်ရလဒ်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့် စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ဖတ်ရှုမှုအရေအတွက်ကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး ပိုမိုတိကျသော ကောက်ချက်ဆွဲရန် သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် တန်ဖိုးအားလုံးကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။
လိုင်းအရေအတွက်: သင့်လျော်သော ချန်နယ်အရေအတွက်နှင့် oscilloscope ကို ရွေးချယ်ပါ၊ ချန်နယ်များ ပိုများလေ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။ Analog များသည် ချန်နယ်2လိုင်းသာ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဒစ်ဂျစ်တယ် လိုင်းများသည်2နှင့် အထက်တွင် ရှိနေနိုင်သည်။
interface: အထူးသဖြင့် သင်စတင်သူဖြစ်ပါက တတ်နိုင်သမျှ အလိုလိုသိလွယ်ပြီး ရိုးရှင်းသင့်ပါသည်။ အချို့သောအဆင့်မြင့် oscilloscope များသည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်သာ သင့်လျော်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အတွေ့အကြုံနည်းသောအသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် လက်စွဲစာအုပ်ကို အမြဲမပြတ်ဖတ်ရှုရန် လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် vs analog: ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများသည် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့် မှတ်တမ်း၏အရှည်ကို အကန့်အသတ်မရှိပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ၎င်းတို့၏အားသာချက်များကြောင့် စျေးကွက်တွင် လက်ရှိလွှမ်းမိုးနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုသည် ကိစ္စအားလုံးနီးပါးအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် oscilloscope ဖြစ်သင့်သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: အကောင်းဆုံး oscilloscope အမှတ်တံဆိပ်များမှာ Sigent၊ Hantek၊ Rigol၊ Owon၊ Yeapook စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ မော်ဒယ်များထဲမှ တစ်ခုကို ဝယ်ယူခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အသွေး အာမခံချက် ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ » သင်၏ အီလက်ထရွန်းနစ် ပရောဂျက်များအတွက် အကောင်းဆုံး oscilloscopes
ဤဘုတ်နှင့် ၎င်း၏ပရိုဂရမ်များကို အပြည့်အဝကျွမ်းကျင်စေရန် Arduino ရှိ အကောင်းဆုံးစာအုပ် 12 အုပ်
အသုံးပြုမှု နှင့် ထူးခြားချက်များအရ CNC စက်အမျိုးအစားအားလုံး